no set upwindow — MYSTERY ZILLION
no set upwindow
ဘုတ် က မိတ် အင် ချိုုုင်းနား ပါ ။ဟက်ဒစ် က 40 ဂစ် ၀င်းဒိုး က safemod ကပဲ တက်ပါ တယ်:O
ပြသနာ က window ကတက်လီုက် မတက်လိုက် နောက် ဆုံး verifying pool data DMI .....
boot from cd:boot faliure insert disk in the cd-rom ဆိုပြီး ဘာမှပေါ်မလာလို.
ကယ် ကြ ပါအု့း
arainnamar wrote: »
HDD များလွတ်သွားသလားမသိဘူးခင်ဗျာ... BIOS setup မှာ HDD တက်မတတ် တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာ.... BIOS setup မှာ HDD မတက်လာဘူးဆိုရင် HDD လွတ်တာနေမယ်... HDD က 40 ဆိုတော့ IDE ဖြစ်မယ်ထင်တယ်... သေချာအောင် HDD ကို IDE တစ်ချောင်းထဲ မှာ တပ်ပြီးတော့ စမ်းကြည့်ပါဦးဗျာ... တစ်ခါတလေ မှာ jumper တွေမှား လို့လဲဖြစ်တတ်ပါတယ် BIOS မှာ HDD ကိုသိမသိ တစ်ချက်လောက် ကြည့်ကြည့်ပါအစ်ကိုရေ... အစဉ်မပြေဘူးဆိုရင်လဲပြောပါခင်ဗျာ တစ်ခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာလေးတွေ ဝိုင်းစဉ်းစားပေးကြတာပေါ့ :D:D
ဘုတ် က မိတ် အင် ချိုုုင်းနား ပါ ။ဟက်ဒစ် က 40 ဂစ် ၀င်းဒိုး က safemod ကပဲ တက်ပါ တယ်:O ပြသနာ က window ကတက်လီုက် မတက်လိုက် နောက် ဆုံး verifying pool data DMI .....boot from cd:boot faliure insert disk in the cd-rom ဆိုပြီး ဘာမှပေါ်မလာလို.ကယ် ကြ ပါအု့း
Safe mode ကတက်သေးတယ်ဆိုရင် Data တွေတော့ အရင် Backup လုပ်ထားပါလားဗျ။ HDD ကနှုတ်ဆက်နေပြီလားမသိဘူး။
ထောက်ခံပါတယ်...အဲဒါစိတ်အချရဆုံးပါပဲ.. အရေးကြီး ဒေတာတွေများရှိနေလား...???